जिद्दी बच्चालाई कसरी सुधार्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ तरिका - Khabar Break | Khabar Break
जिद्दी बच्चालाई कसरी सुधार्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ तरिका
सन्तानका पहिलो गुरु भनेकै आमाबुवा हुन् । हरेक अभिभावक आफ्ना सन्तान आज्ञाकारी हुन् र सफल बनुन् भन्ने चाहाना राख्दछन् । प्रत्येक आमाबुवा चाहान्छन्, बच्चाहरुमा राम्रो संस्कार होस् । तर अचेल सन्तान सानै उमेरबाट आफ्नो अभिभावकका कुरा पालना गर्नु भन्दा उल्टै जिद्दी हुदै गएका छन् । सन्तानका कारण धेरै आमाबुवाहरुले आफन्त तथा छरछिमेकबाट गाली खाने स्थितिसम्म हुने गर्छ ।